I-T2 + ETHULE + YOKUPAKA, isikhungo, iminithi elingu-1 ukusuka echwebeni namabhishi - I-Airbnb
I-T2 + ETHULE + YOKUPAKA, isikhungo, iminithi elingu-1 ukusuka echwebeni namabhishi
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Solange
Indawo emangalisayo enhliziyweni edolobhaneni Cassis, eduze ne-port, amabhishi nazo zonke Izinsiza, umklami efulethini oncomekayo kabusha ngokuphelele, aqashiwe nge evikelekile yokupaka isikhala, has a lokulala 140 embhedeni cm, ikamelo lokuphumula kuhle futhi libalele, ikhishi elinemishini kanye negumbi lokugezela elinazo zonke izinto ezimbi zemod, i-TV ne-Wifi.
I-pied-à-terre ekahle yokuthola noma ukuthola kabusha ubuhle beCassis, ichweba layo kanye nobumnandi bayo bempilo ...
Indawo yokuhlala ethokomele, enethezekile nayo yonke imishini edingekayo.
Izinyathelo zezempilo ezinzima kakhulu.
Siqinisekisa ukuthobela ukuthinta kwesithiyo kanye nokuqhelelana komphakathi.
4.71 · 200 okushiwo abanye
Leli fulethi litholakala enhliziyweni yedolobhana laseCassis, phakathi kwemigwaqo ejwayelekile yaseProvencal kanye nolwandle enkabeni yedolobha. Konke kwenziwa ngezinyawo, imakethe yeProvencal, izitolo, izitolo ezincane zabaklami, ikhefi encane ethekwini!
Senginesikhathi ukwazisa futhi siyakwamukela abahambi yami, usizo bathole indawo enhle, elihle ubunjalo uhambo, zokudlela ebukekayo, ukuvakasha creeks ngesikebhe futhi izinhlelo ezinhle esifundeni ... emva 8 p.m. Amahora okusebenza angaphandle.
Senginesikhathi ukwazisa futhi siyakwamukela abahambi yami, usizo bathole indawo enhle, elihle ubunjalo uhambo, zokudlela ebukekayo, ukuvakasha creeks ngesikebhe futhi izinhlelo ez…
Inombolo yepholisi: 13022000169QA